Dowladda oo heshiis la saxiixaneysa Shirkado & digniin laga soo saaray | Allbalcad Online
Home WARARKA Dowladda oo heshiis la saxiixaneysa Shirkado & digniin laga soo saaray
Dowladda oo heshiis la saxiixaneysa Shirkado & digniin laga soo saaray
Saacadaha soo socda ayaa waxa la filayaa in Dowladda Soomaaliya ay heshiis Xarunta Madaxtooyada ee Muqdisho kula saxiixato Shirkadaha Coastline oo horay loo oran jiray Som-Oil iyo shirkada Liberty, kuwaas oo qabilsan qotista shidaalka, heshiiska oo maalmihii la soo dhaafay la hadal haayay.
Heshiiska waxaa goobjoog ka noqon doona Madaxweynaha dowlad Goboleedka Koonfur Galbeed Cabdi Casiis Xasan Maxamed ( laftagareen) oo shalay Muqdisho soo gaaray & Madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaariye( Qoor Qoor ) oo Maanta Muqdisho si deg deg ah kusoo gaaray.
Blockyada Shidaalka ee la bixinaayo ayaa waxaa ay ku kala yaalaan Xeebaha degmada Baraawe ee Gobolka Shabeellaha Hoose & Xeebaha degmada Hobyo ee Gobolka Mudug, degmooyinkaas oo kamid ah meelaha Soomaaliya kamid ah oo horay sahminta looga sameeyay.
Xubnaha Midowga Musharixiinta Madaxweynaha oo shalay soo saaray qoraal ay ka digayaan in dowladda Soomaaliya ay heshiis qarsoodi ah la saxiixato Shirkadahaas, iyaga oo sheegay in uu dhibaato u keeni karo howlaha deyn cafinta Soomaaliya.
Previous articleAfghanistan iyo Taliban oo wadahadallada dib u bilaabaya
Next articleLaamaha Amniga Soomaaliya oo Su’aalo la weeydiiyay